७० वर्षका वृद्ध बाउकाे प्रेम ५५ वर्षकी महिलासँग बसेपछि छोराछोरीले नै गरिदिए बिहे ! – Aaj ko Sandesh
एकै वर्षमै ३ अभिभावक गुमाएका ११ वर्षिया अभागी युवराज !
स्कूल बसवाट खसेर ६ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको घटनास्थलमै मृ,त्यु
फेसबुकको love : इन्जिनियर हुँ भन्दै बिहे गरेको केटो १० कक्षा पास मात्रै !
“घरमा कोही मानिस आँउदा घरको इज्जत जान्छ भनेर मलाई लुकाइन्थ्यो” –रमेश प्रसाई -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
आज मिति २०७८ साल बैशाख ६ गते सोमबार , अप्रिल १९, तपाँईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ?
मलेसियामा काम गर्ने नेपाली कामदारहरुलाइ आयो दु:खद खबर !
दाई भन्दै घरमै आउने छोरीको आमालाई श्रीमानले लिएर हिँडेपछि श्रीमती मु र्छा (भिडियो हेर्नुस्)
विद्यालय बन्द गर्न चौतर्फी दबाब, अभिभावक भन्छन्- ज्यान रहे फेरि पढौंला
नेपालमै भेटिइन् मोटर बनाउे महिला, कमाइ यति धेरै, मान्छे भए चकित
जन्मदिने आमाको हातबाट खोसेर सचिनलाई तेजेन्द्रले यसरी लगे (हेर्नुस भिडियो)
मुख्य पृष्ठ /News/७० वर्षका वृद्ध बाउकाे प्रेम ५५ वर्षकी महिलासँग बसेपछि छोराछोरीले नै गरिदिए बिहे !
७० वर्षका वृद्ध बाउकाे प्रेम ५५ वर्षकी महिलासँग बसेपछि छोराछोरीले नै गरिदिए बिहे !
123 1 minute read
एजेन्सी, १८ भदाै । एक ७० वर्षका वृद्धकाे अर्की एक महिलासँग प्रेम बसेपछि छाेराछाेरीले नै बिहे गराइदिएकाे खबर छ । कुराे भारतको मध्यप्रेदशको हाे । प्रेम अन्धाे हुन्छ भन्ने कुरा ती वृद्धकाे जोडीले प्रमाणित गरिदिएको छ ।
मध्यप्रदेशका ती वृद्ध उपचारका सिलसिलामा अस्पताल गएका थिए । साेही सिलसिलामा अस्पतालमा भेटिएकी ५५ वर्षीया महिलासँग ती वृद्धकाे प्रेम बसेछ । दुवैबीचको प्रेम देखेर उनीहरुका सन्तानले विवाह गराइदिएकाे खबर नवभारत टाइम्सले प्रकाशन गरेकाे छ ।
समाचारका अनुसार ७० वर्षका ओमबार सिंह नाम गरेका ती वृद्ध स्थानीय ल्ला अस्पतालमा भर्ना थिए । त्यति नै बेला उनको भेट ५५ वर्षकी गुड्डीबाईसँग भयो । अस्पताल बसाइमै माया बसेछि तीन दिनपछि नै दुवैले विवाह गर्ने निर्णय गरेकाे बताइएकाे छ । अहिले ओमकार सिंहका चार सन्तान छन् रहेकाे जनाइएकाे छ । तर सन्तानले नै ती वृद्धकाे वृद्धकाे बिहे गराइदिए । उनकी श्रीमती भने ३ वर्ष अघि बितेकी थिइन् ।
जवानी हुँदा सम्म ठिकै थियो, अपाङ्ग भएपछि दश बर्ष देखी एउटा कोठा बन्दी बनाएर श्रीमान बेपत्ता
आफ्नो भाईको नि धन सँगै भाबुक हुँदै राजेशले शेयर गरे यस्ता तस्बिर
झुक्किएर पनि खानुहुँदैन ग्यास्ट्रिक भएका व्यक्तिले यस्ता खानेकुरा, नत्र अल्सरको जोखिम
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन-२१ गते बुधबारको रा’शिफल !
अनिशाको घिड-घिडोले सास जान सकेन कन्चनको; अन्तिम अ’वस्थामा पनि आइन् निस्ठुरी अनिशा (भिडियो हेर्नुस)
27 mins अघि
3 hours अघि